Stephen Hawkins - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Stephen Hawkins
Valiny : 113
rhaj0 - 15/03/2018 03:18
Ka dia nodimandry izany i Stephen Hawkins. Isan'ny ngezalahy @ Siansa izy.
Ireto misy resaka na koa hoe eritreritr'i Hawkins zaraiko eto ..
Stephen Hawkins (8 January 1942 – 14 March 2018)
"We are each free to believe what we want and it is my view that the simplest explanation is there is no God. No one created the universe and no one directs our fate. This leads me to a profound realisation. There is probably no heaven, and no afterlife either. We have this one life to appreciate the grand design of the universe, and for that, I am extremely grateful."
rhaj0 - 15/03/2018 03:37
Da ity izany hono atao devoara raha te-hanita-tsaina. Izaho koa mbola tsy namaky fa hiezaka ee..
endriny - 15/03/2018 05:00
Marina ny azy. Ny olona tsy te hampiasa saina no manankina fotsiny ny tranga misy amin’ny hoe: Atra sy Demonia.
Raha misy marary eo an-tanana ka somary manahirana ny mitsabo ilay aretina, dia lazaina fa mosavy, na asan’i Satana.
Raha misy zavatra tsara saingy tsy hay ny niaviany dia tolo-Janahary
stahtam - 15/03/2018 08:52
Io moa dia resaka efa niverimberina (efa in-100 amby 1000) teto fa olona vaovao indray moa no resahina (efa tsy afaka hamaly ny fanontaniana intsony) ka dia maneho hevitra. Scientiste (izany) io rangahy io, ary milaza hoe: "...[and] science, which is based on observation and reason...." dia misy fanontaniana (indrisy) tsy azony valiana intsony ireto:
1°) Talohan'ny fisian'ilay matière kely niteraka ny big bang, nisy ve ny temps? Ary raha nisy inona no nisy teo, "matière" sa inona ?
2°) Science koa ve ny "filazany hoe tsy nisy ny mpamorona izao zavatra rehetra izao?" Dia reason sy observation avy aiza no nataony base t@ io ?
3°) Ny "théorie de Darwin" ve hono ekeny sa laviny satria misy ireo savants scientifiques no mandà an'io théorie io ?
Azo valiana (par un tiers) io fanontaniana ho an'Ingahy oloben'ny sciences io ary azo tsy valiana satria rehefa tsy itovizana ny référence iaingàna sy ekena ho marina dia tsy maintsy ho resaky ny moana sy ny marenina ihany no iafaràny.
endriny - 15/03/2018 13:08
Ny ahy dia apetrako foana @ hoe rehefa tsy hay dia tsy hay fa tsy terena hisy fanazavana foana akory.
Mikasika an’i tsanga_kevitr’i Darwin: hatreto aloha ny mpahary siansa rehetra dia manaiky ilay fitsinjarana (classification) sy ratsana (embranchement) nivoaran’ny fiainana teto an-tany. Fa ireo mpikaroka avy @ Oniversite Katolika irery ihany no asaina manohitra an’io feno-kevitra io. Raha tsy izany izy voaroaka, ary izay koa no nanaramana azy.
Saingy ny Papa dia efa niainga ny fivoarana, ary dia hiova anarak’izay ny rehetra.
stahtam - 15/03/2018 14:35
Ka mba ilay valin-teny (tokony) mba hanakaiky ny an'ingahy Stephen H. ange no mba takarintsika eto e. Ny anao iny efa fantatra ny fetrany. Fa ilay hoe "based on observation sy reason" kosa no mba tokony hoakaikezinao kokoa raha ny fahitako azy. Sa hoe "rehefa tsy hay dia tsy hay ?"
endriny - 15/03/2018 14:53
Ka izay ny siansa sy fiainana: miankina amin’ny fandinihana sy ny fampiasana saina
Mandinika ny Ntaolo dia nahita fa ny fotaka rehefa maina dia lasa mafy Be. Dia nampiasa saina kely izy dia hitany hoe azo atao tamboho sy trano io.
Fa rehefa tsy hay kosa dia tsy hay, fa tsy terena fotsiny. Ny Ntaolo aza rehefa misy zavatra tsy hainy dia ataony Indray andro Hono. Fa tsy namaritra marina izy.
rhaj0 - 15/03/2018 18:05
stahtam 1°) Talohan'ny fisian'ilay matière kely niteraka ny big bang, nisy ve ny temps? Ary raha nisy inona no nisy teo, "matière" sa inona ?
Ito moa efa novaliako in-10 aman-100 koa, fa dia misaotra an'i Stahtam manontany indray, mba misy hamerenan azy.
Hozy ho'a i Hubert Reeves (kanadiana ary olombe-ny Siansa koa) fa ilay "matiere kely" t@ big-bang anie, ka TSY mbola hay, na ny composition-ny, na ny interaction entre-n'izay particules ao.
Izany hoe, TSY mbola hay. Dia araka ny tenenin'i Endriny, dia "rehefa tsy hay dia tsy hay fa tsy terena hisy fanazavana foana akory". Ny zanantsika no hanazava izany, tahaka ny nanazavaintsika ny zava-misy @ zoky sy RaRntsika.
Dia ho averiko tantaraina indray ve ny baolin'i Cheminots ry Stahtam aaa??? Io mba tantarao hoe ry Stahtam, mba hahitana raha mba misoka-tsaina dia mba mihaino izay resahina ihany ianao ao, sa dia bemarenina toa an'i ... RBNIR
stahtam 3°) Ny "théorie de Darwin" ve hono ekeny sa laviny satria misy ireo savants scientifiques no mandà an'io théorie io ?
Ito moa efa noresahina in-10 aman-100 koa, fa dia misaotra an'i Stahtam manontany indray, mba misy hamerenan azy. Tsy mi-click aminao ve ry Stahtam raha mamerina indray aho hoe ...
"work in progress"?? Io efa nataoko ngeza kokoa io
Sa izao indray azany ee... Ndana ange jereo ilay film (biographique) an'i Stephen
Fa t@ fiainany tao, dia i Stephen ihany no ni-contredire, taty aoriana, an'ilay these de doctorat-ny.
stahtam 2°) Science koa ve ny "filazany hoe tsy nisy ny mpamorona izao zavatra rehetra izao?" Dia reason sy observation avy aiza no nataony base t@ io ?
Hoz'izy ihany hoe:
== manome "explanation" mifototra @ "reason sy observation" izany.
Fa raha ny @ God, dia misy resaka natsipin'i Stephen koa, hoe:
"God may exist, but..."
T@ ilay film io ambony io, dia nahafinaritra ahy ny firesak'i Stephen sy Jane sipany. Fa i Jane dia mpivavaka, nefa dia mila mitandritandrina ihany ilery ngo dia lasa mitsoaka eo i sipakely
Ary dia smooth be mihintsy ny resaka @ izao fisian'izao God (imaginaire) izao.. F'izany hoe mety tsy izay k'lou no tena nitranga fa mba manjamanja ny scenario t@ iny ee
stahtam - 16/03/2018 06:10
"Based on observation and reason" dia avy eo izy ihany no mi-contredire ny tenany !!! Dia mbola tohizo ihany àry e ! Aleoko izaho mihitsy no ekeko hoe tsy mi-click, fa dia confirmer-o eo ihany dia contredise-o eo ihany e! Hay ve ka ka izay no tena izy e ! Noheveriko fa mba ...
RBNIR - 16/03/2018 08:09
Zavatra tsy hay izany no ianteheranao rhajo!!!
Misy olona mikiakiaka ary hoe nisehoan'i JEsosy taty aorianan'ny nahafatesany sns...tsy iray fa marobe (nanomboka tamin'ireo mpianatra, dia mitohy mandraka androany...
Tsy mihaino ianao fa ny anao aleo bing bang (zavatra tsy hay no ianteheranao)
RBNIR - 16/03/2018 10:20
Izao no tsarovy, Andriamanitra dia MARINA (juste),
Tsy manameloka olona izy raha tsy efa maniraka mpampinany milaza mialoha izay hataony....
« Tsy manao na inona na inona tokoa Jehovah Tompo, raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. » (Amosa 3:7)
Ireny mpaminany irahany ireny no mila henoin'ny olona sy inoany....
Izay rehetra mino an'ireny mpaminany ireny no atao mino an'i Jesosy ary koa mino an'Andriamanitra,
Izay tsy mino kosa araka io teny io no mpandà an'Andriamanitra...
Izay rehetra mino dia ity no valisoa....« Fa toy izao no nitiavan' Andriamanitra izao tontolo izao : nomeny ny Zanani-lahy Tokana , mba tsy ho very izay rehetra mino Azy , fa hanana fiainana mandrakizay . » (Jaona 3:16)
Izay rehetra tsy mino kosa dia izao no hiandry azy...« [Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina] » (Marka 16:16)
Meteza ary hino izay olona nirahany mivantana ry sakaiza....Ity olona ity irery aloha raha ny eto madagasikara no mampianatra ny fampianarana mitovy 100% amin'izay nampianarin'i JEsosy...
Amiko azo antoka ny fanambarany....
rhaj0 - 16/03/2018 14:01
stahtam "Based on observation and reason" dia avy eo izy ihany no mi-contredire ny tenany !!! Dia mbola tohizo ihany àry e ! Aleoko izaho mihitsy no ekeko hoe tsy mi-click, fa dia confirmer-o eo ihany dia contredise-o eo ihany e! Hay ve ka ka izay no tena izy e ! Noheveriko fa mba ...
- Rahefa "takatrao" ry Stahtam hoe, inona no "observation and reason" ifotoran'ny teoria iray, dia mora kokoa ho anao ny "manaiky" ary mivoatra sy manita-tsaina eee..
- Fa rehefa "TSY takatrao" kosany, dia tena tsy mahagaga raha mi-"hay va re" ianao (ary hotry ny mampome akoriny azany).
Ity indray azany ohatra iray mety (tokony) ho "takatrao" eee.. Ity toa niveau classe de 6eme aty raha tsy diso aho.
- Hainao ve ny "modèle de Rutherford" ry Stahtam? mi-décrire ny ataoma io.
- Dia hainao ve ny "modèle de Bohr" ry Stahtam? mi-décrire ny ataoma koa io.
- Dia hainao ve ny fandehan'ny tantara sy ny fivoarany @ io resaka ataoma io?
- Dia hainao koa ve ny vokatry ny fahalalana ireo modèles (roa) ireo @ teknolozia koa ohatra?
- Dia mbola hi-"hay va re" ihany ve ianao ry Stahtam rahefa "mahatakatra" an'izany rehetra izany?
rhaj0 - 16/03/2018 17:37
Tohizako kely.. Raha sanatria, TSY (mbola) takatrao ny @ Rutherford sy Bohr ry Stahtam, dia... dia ahoana azany ny alternative inoanao ao ry Stahtam aaa???
Satria ve no "confirmer-na" (Rutherford) dia ni-"contredize-na" (Bohr) ity resak'Ataoma ity, ka dia, aleo adaboka any daholo, fa ny efa hain'ny RaR sy ny Antitra feno fahendrena izao, dia i Aristotle, dia efa hoe, ny zava-drehetra dia niorina t@ kasinga 4: Afo - Rivotra - Rano - ary Tany.
Dia kôpy ianao fa na i Mowgli azany dia nivanitika gilady rahefa ninonino foana i Shere Khan fa io Afo io anie ka Andrmntra.
rhaj0 - 18/03/2018 17:46
Ny fahalalana nentin'i Stephen @ Siansa moa izany dia ny momba ny trou noir.
Tany @ 1910-20s tany, dia efa niteny i Einstein fa misy io. Fa TSy nety, na hoe tsy te-hino an'izany ny kaomionitia siantifika. Efa taty @ 1960-70s vao lasa nandalina izany zareo, ary i Stephen no isan'ny lohandohany. Nahita (naha-observer) trou noir raolona, dia ireto trou noir be mitelina kintana (etoile).
Ny nentin'i Stephen, dia:
1- ny nampifandray ny trou noir, ilay goavana mpitelina kintana, sy ny big-bang.
Ny @ big-bang dia nisy "very dense matter" izay nipatitaka.
Ny trou noir indray, dia matière ni-collapse, ary lasa "very dense matter".
2- io trou noir io, rahefa mandeha ny fotoana, ary amina milliards d'années io an, rehefa mandeha ny fotoana, dia hoy Stephen hoe, hi-s'évaporer. Tombatomban'i Stephen io.
3- nanombatombana koa i Stephen fa misy ny "miniature/tiny/micro back hole".
Ny tombatombana (hipaotezy), na ny an'i Einstein t@ 1910-20s, na ny an'i Stephen ireo, dia mifototra amina matematika rezatra be. Ny an'i Einstein efa voamarina. Ny an'i Stephen mbola ... "work in progress".
Azo iverenana ireo teboka telo ireo, fa samia ange mi-gogola an'ireo ee..
(resaka reko izao izaho manoratra izao @ radio-canada no averiko io, fa handalina tokoany moa ao aoriana kely, ary afaka hanampy fanazavana + references)
rhaj0 - 18/03/2018 21:12
Aleo azany hoe mba hiezaka aho hanazava, araka ny fahazoako azy, ireo resak'i Hawking ireo. Raha misy na mahalala namana Physicist/Astronomer ianao, dia ndao hifanoro @ ity resaka ity, ka ahitsio na fenoy raha ilaina izay resako eto. Hotry ny mampisy aingam-mpanahy ahy ny nataon-dRatpkl, fa izy mantsy dia mpanely/mpizara fahalalana ("divulgateur"), niezaka ny hizara sy hanaparitaka ny fahalalana (Siansa) @ fomba ahafahan'ny maro mahazo ny resaka. Tiako mba zaraina @ teny gasy koa izany.
Ataoko eto @ lohahevitra Fivavahana/Finoana ity, satria tonga dia tsoriko : "handiso" ny fivavahana/finoana (rehetra) io resaka io. Mila ampahalalana an'izany ny mpanaraka ny fivavahana/finoana, mba tsy ho voambaka sy voazanak'ireo olombem-pinoana intsony ny Malagasy eto, na hoe mba tsy hanidy saina sy hamato-tena amina fahalalana diso sy mivoana lava eo.
1. Big-bang :
Raha mijery ny izao tontolo izao, sy t@ fotoana elaela talohan'ny androany (an-100 na 1000 taonany lasa, satria voatazona an-tsoratra ny fipetraky ny Tontolo), dia mahita fa mifanalavitra miha-mifanalavitra daholo ireo bolongan-draha goavana (objets celestes) eto @ Tontolo, dia ireo galaksia sy tambatra-na galaksia izany. Raha rohizina amina tsipika izany ny lalana (trajectoire) nodiavin'ireo bolongan-draha ireo, dia iaraha-mahita fa
- @ ho avy, dia vao mainka hifanalavitra ireo bolongan-draha ireo. Izay ilay hoe mihanaka mifanalavitra ny Tontolo (expansion de l'Univers)
- fa t@ lasa kosa, raha "ahemotra" ny fotoana, dia afaka ny hita fa toa ny niainga avy tamina "teboka" (na "point") iray ireo bolongan-draha na objets celestes goavana be ireo. Koa tokony eo @ io "point" io izany no nisy (niainga) ny tambatr'ireo objets celestes rehetra hita izao; ary dia mazava ho azy (?) fa tena "very densed matter" no nisy teo @ izay "point" izay.
Mazava ho azy fa TSISY "nahita" io "point" io, fa rahefa atao ny kajikajy matematika, dia satria fantatra ny lalana (trajectoire) sy ny hafainganam-pandeha (vitesse) an''ireo bolongan-draha @ ity "expansion" ity, dia voakajy izany fa efa ho tany @ 13.77 milliards d'années no niainga t@ io "teboka" io ireo raha (matières) eraky ny Tontolo no nipatitaka, ary dia io lasa ireo galaksia an-tapitrisany iaraha-mahita izao ireo. @ kajikajy matematika, dia rahefa aseho ny kisary (graphe) an'ilay fihanaky ny tontolo (expansion) io, dia "point singulier" (voambolana matematika) io teboka niaingana io.
Koa t@ 13.7 milliards d'années izany, dia azo tombatombanana fa avy teo @ io "point singulier" io no nipoaka ilay "very densed matter".
Izay no antsoina (tsotsotra) hoe "big bang".
RBNIR - 19/03/2018 05:54
Soa ihany fa nohamafisin'i rhajo tsara hoe tombatombana ilay izy...
Fa izaho kosa nihezaka nitondra porofo tamin'ny zava-misy mitranga ankehitriny .....
RBNIR - 19/03/2018 12:44
tena dommage, raha tsy nitsipaka an'i JEsosy ingahy Stephen Hawkins dia mety ho hitany ihany ny tena marina momba ny trou noir izay nilofosany mafy nandritra ny taona maro dia maro...
rhaj0 - 19/03/2018 13:48
aleo aloha hivanitika kely (@ hadalan-dry RBNIR sy ny tariny) indray, fa aoriana tohizana serieux ny resaka.
Dia nihaona t@ Papa ho'a i Stephen t@ androny. Fa hita(ko) t@ tarehin-dRAFransisy, fa vasoka be Rafransisy, fa i Stephen mantsy dia maneho foana ny maha-resaka varalila ny Finoana.
Dia nanatona i Fransisy, mangasihasy sahala @ ireny boaikely ireny. Dia nikimpy mafy toa constipé Rafransisy, ary loza rey olona fa dia hotry ny "nametra-tanana" re Ingahy rainy eee...
Tena ahatsiarovako an'i Gasy1zay sy ny "fametraha-tanany" ee...
pensée mazika, quand tu nous tiens...
Ntssss... angaha nisy inona akoriny??
Io foana no nilazan'i Mandela hoe, "useless" izany "vavaka" (@ Andmntra imazinera) izany, fa ampazahoy fanafody eee...
endriny - 19/03/2018 19:38
Dommage hono? Soa Fa tsy Doma izy, fa nahatsapa ny lainga sy ny fitaka nataon’ny fiangonana
rhaj0 - 22/03/2018 16:03
rhaj0 Koa t@ 13.7 milliards d'années izany, dia azo tombatombanana fa avy teo @ io "point singulier" io no nipoaka ilay "very densed matter".
Eto izany dia raha ny lojikan-javatra, dia misy ity "very densed matter" ao @ ilay "point singulier" tany @ 13.7 milliards d'années.
Dia miitatra ary mbola marobe ny fanontaniana. Dia inona no talohan'io 13.7 milliards d'années io? Avy taiza io "very densed matter" io?
Hoy ho'a i Hubert Reeves, tamina fandaharana reko t@ radio...
Ao @ io "very densed matter" io, dia mbola TSY hay aloha, @ izao ora izao,
a- inona marina no raha (matière) ao.
Iretsy @ sary io ambany io ve no kasinga ao, sa mbola hafa koa?
b- dia inona ny "interactions" misy eo @ ireo kasinga?
Mbola arak'iretsy Hery @ sary esty ambany koa ve?
Ka rehefa "tsy mbola hay" dia "tsy hay" izany, fa tsy terena hisy fanazavana izao dieny izao. Ho valian'ny zanantsika izany any aoriana. Efa betsaka ihany izay efa voavalin-dry Albert sy Stephen izay.
Fa raha miverina @ Stephen, dia eo indrindra no zavatra isan'ny nohalalininy: nitady teoria izay manambatra
- ny fahalalana ny bolongam-be, hazavain'ny "general relativity", sy
- ny fahalalana ny kasinga bilitika-kely, hazavain'ny "quantum mechanics".
Mbola be dia be ny mbola mila karohina sy halalinina, ary ifohazana maraina. Fa ny mahavelom-bolo aloha, raha ny fahitako azy, dia
- ny hazakazaky ny firosoan'ny teknolozia dia hanafaingana ny fikarohana sy fandalinana, ary hiitaran'ny fahalalan-draolona haingana kokoa
- efa maro ny mpikaroka an'izy ity; ankoatry ny ataon-dreo ao @ CERN ao Soisa ao izay mahavalalanina ahy aloha, dia na dia mieritreritra fotsiny hoe, tena maro ny olona mifototra mikaroka toa izany, fa tsy mihoboka na mivarina @ izao finoana(noam-poana) izao foana